Bisadda Xabashida, wax kasta oo ku saabsan bisadan bisadaha ah | Bisadaha Noti
El bisadda abyssinia Waa xayawaan aad loo jecel yahay: waa ciyaar ciyaar badan, hab-dhaqankiisuna waa mid aad u qurux badan. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu ka mid ahaa tartammadii ugu horreeyay ee la aqoonsado, sidaa darteed iyada oo aan si fiican loo aqoon, haddana lama oran karo wax badan baa iska beddelay xagga Xabashida ee laba qarni ka hor jirtay, oo ahayd markii ugu horreysay ee laga hadlo. xayawaanka ku jira buugga "Bisadaha, Qodobadooda" oo qoraagu yahay Gordon Staples.
Sidoo kale waa a dad aad u jecel, markaa waa mid ku habboon saaxiibtinimada carruurta ... mana ahan sidaas carruurta 😉. Ma jeclaan lahayd inaad la kulanto? Aan tagno halkaas.
1 Taariikhda Abyssinia
2 Astaamaha jir ahaaneed ee taranka
3 Habdhaqanka Xabashida
4 Daryeelka noocyadan
4.3 Xannaanada xoolaha
5 Caafimaadka Abyssinia
5.1 Immisa ayey ku kacaysaa bisadda Xabashidu?
5.2 Sawirada bisadda Abyssinia
Bisadda Xabashida, in kasta oo ay si kale u muuqan karto, kama timaado Abyssinia (maanta waxay ahaan lahayd Itoobiya), laakiin taa beddelkeeda waxaa la aaminsan yahay inay ka timaaddo Masar. Waxa la ogyahay ayaa ah in bisadii ugu horaysay ee noocan ah ee lagu soo bandhigay England ay ka timid Abyssinia. Sannadkii 1874 ayaa la daabacay buugga "Bisadaha, Dhibcoodooda" oo aan hore u soo sheegay, oo sharraxaad ka bixinaya bisaddii ugu horreysay ee la yiraahdo Zula, haweeneydii ugu horreysay ee Abyssinia ee ay laheyd Mrs. Barrett-Lennard oo timid England 1868 duulaan milatari oo ka socda Abyssinia. Jidhkiisa waa la arkay oo xariiq maleh, halkii uu ka yaraa, laakiin xoog iyo murqo leh.
Laakiin waxaa jira dad doorbidaya in ay u maleeyaan in noocani dhab ahaantii ka imanayo iskutallaabyada u dhexeeya silvers kala duwan iyo bunni leh bisadaha asalka u ah England, 'Bunnyka Ingiriiska'.
Sikastaba, dhammaadkii qarnigii XIX taranka hore ayaa loo yiqiin, XX-na-na waa la soo daabacay. Ingiriisku wuxuu bilaabay taranka nidaamsan, sanadkii 1909-kii ayaa weyshii ugu horreysay ee Abyssinia ay timaaddo Mareykanka. 1930-yadii, Xabashida waxaa laga soo waaridiyey England oo noqon lahayd kuwa heli doona barnaamijyada taranka ee hadda jira.
Astaamaha jir ahaaneed ee taranka
Bisadan waxay aad ugu egtahay cougar, inkasta oo ay aad uyartahay scale. Waxay leedahay jidh toosan oo kacsan, aragti taabasho leh iyo madax saddexagal aad u qurux badan. Laakiin aan aragno heerkaagu yahay:
Madaxa: qaab saddex xagal ah, oo leh dhago wareegsan iyo indho u eg yicib u eg cagaaran ama dahab ah.
Jirka: caato, caato, muruq. Lugaha waxay u dhigmaan jirka intiisa kale. Dabada ayaa dheer oo mashquul badan.
Fur: timuhu waa gaaban yihiin, buluug, qalin, sorrel ama fawn.
Peso: inta u dhexeysa 4 iyo 6 kiilo.
Cimriga: 13-14 sano.
Tani waa bisad aad u firfircoon, oo jecel inuu waqtigiisa ku qaato fuulitaanka, ciyaarta ama sahaminta. Sababtaas awgeed, qof kasta oo raba inuu guriga ku haysto xayawaan ka mid ah noocyadan, waa inaad iibsataa xoqan sare oo gaara saqafka iyo / ama ku dheji xoogaa shelf ah guriga dhexdiisa si aad u daboosho baahiyahaaga.
Isaguba waa nin caqli badan oo la dhaqmi kara, si wanaagsan ula dhaqanka carruurta. Waxaa laga yaabaa in khasaaraha kaliya uu yahay taas ma jecla inuu keligiis ahaado, sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa inaad wakhti badan la qaadato isaga, oo aad daqiiqadahaas ama saacadahaas u hurto inaad la joogto xayawaanka, ama kubad ku ciyaar ama nasasho.
Bisadda Abyssinia, sida bisadaha kale ee ka mid noqda qoyska, waa inay helaan taxaddar taxaddar iyo taxaddar u dammaanad qaadaya wanaaggeeda:
Aad ayaa lagula talinayaa sii quudin tayo leh, bilaa badar. Flines waa hilib cunno, umana baahna dalagyo badar ah ama waxyaabaha laga soo saaro (runti, waxay sababi kartaa xasaasiyad). Ikhtiyaar kale wuxuu noqon karaa in la siiyo cunto dabiici ah, oo aan lahayn lafo ama qodax.
Dhererka gaaban ee timaheeda awgeed, waa inaad cadayato oo keliya maalintii hal mar, wax kale inta lagu jiro xilliga molshada. Sidoo kale, haddii aad aragto inuu leeyahay legaas, ha ka waaban inaad kaga saarto faashad nadiif ah.
Markuu eey yahay wuxuu leeyahayiyo waxa loo qaato talaalka, iyo qoyaanka ama kufsiga haddii aynaan rabin inaynu ka dhigno taran laga bilaabo 6 bilood hadday dhedig tahay, ama 8 bilood hadday lab tahay.
Intaas waxaa sii dheer, markasta oo aad dareento inaanad fiicnayn, waxaa lagugula talinayaa inaad tagto.
Maaha bisad leh dhibaatooyin caafimaad oo badan, laakiin waxay soo bandhigi kartaa waxoogaa isbeddel hidde ah, sida hernika xasaasiga ah o guuldaradii kelyaha ee daba dheeraatay. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad aragto inuu hamuun beelay, hoos u dhacay, ama dhibaato haysato, waa inaad u geysaa dhakhtarka xoolaha si uu u baaro.
Maskaxda ku hay in markii hore ee cudurka la sameeyo, sida ugu dhakhsaha badan ee aad uga bogsato.
Immisa ayey ku kacaysaa bisadda Xabashidu?
Daryeelka bisadu waa mas'uuliyad ay tahay inay socoto inta uu nool yahay xayawaanku. Haddii aad runtii diyaar u tahay inaad qaadato, qoyskaaguna sidoo kale waxay rabaan inay ku raaxaystaan ​​la-noolaanshaha bisad Abyssinia ah, raadi xirfad-yaqaanno xirfadlayaal ah. Way waydiisan karaan qaar 800 euros Ey yar, waxay u muuqan kartaa wax badan, laakiin ma jiraan wax la mid ah oo hubinaya in dhogorta cusub ee aad la wadaageyso dhowr sano noloshaada ay caafimaad tahay.
Sawirada bisadda Abyssinia
Bisadda Abyssinia waa xayawaan xarrago leh, oo soo jiidasho leh isla mar ahaantaana. Sidaa darteed, waxaan ku soo lifaaqi doonnaa sawirro dheeri ah oo quruxbadan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisadda Xabashida
Uma heellan wax iibsiga iyo iibinta.
Waxaan kugula talinayaa inaad raadsato abuure u dhow deegaankaaga si aad u hesho bisadda aad raadineyso.
Daawooyinka guriga lagu siiyo bisadaha fuuqbaxay
Maxay uga dhigan tahay bisadu inay ku raacdo